Tsy ho nokapohina ny saka, fa maninona? | Noti saka
Tsy ho nokapohina ny saka, fa maninona?
Izahay rehetra dia maniry ny hiteny hoe manana saka be fitiavana izay tia totohondry sy voaforitra, nefa indrisy tsy ny olona volom-borona rehetra toa ny safosafo, indrindra raha nalaina avy teny amin'ny arabe izy ireo na raha mbola kely dia kely dia tsy nifandray tamin'ny olombelona izy ireo.
Hiresaka momba an'ity lahatsoratra ity isika maninona ny saka no tsy azo totohondry Ary inona no azonao atao mba tsy hitebiteby ny volonao rehefa manome fitiavana azy ianao.
1 Maninona ny saka no tsy azo totohondry?
2 Ahoana no fiompinao saka?
3 Misy saka ve adin-tsaina raha voakitika?
4 Inona no tokony hotadidinao raha tsy mamela ny tenany hikasika ny saka ny adin-tsaina
5 Afaka miaina am-pifaliana ao anaty trano miaraka amina saka hafa ve ny saka na dia tsy petted aza izy ireo?
6 Mety ho faly miaina anaty trano ve ny saka?
7 Azon'ny saka saka ve aho?
8 Ny saka tsy mamela ny tenany hikapohana saka ve dia?
Maninona ny saka no tsy azo totohondry?
Betsaka ny antony tsy itiavan'ny saka kitihina. Ny tena lehibe dia:
Tsy dia nifandray tamin'ny olona izy, na noho izy nipetraka teny an-dalambe na satria, na dia tao an-trano hatramin'ny naha-alika kely aza dia tsy nandany fotoana tamin'ny fianakaviana.
Nanana traikefa ratsy tamin'ny olona mitazona na mikapoka anao ianao. Ary, na dia mandalo aza ny fotoana, ny fahatsiarovana totohondry dia tena tsara ary ho tsarovana foana.
Mahatsiaro fanaintainana amin'ny faritra sasany amin'ny vatanao ianao. Indraindray izy dia afaka mandratra tena, na mety mahazo aretina izy, koa raha hitanao fa tsy salama izy dia aza misalasala mitondra azy any amin'ny mpitsabo biby.
Ahoana no fiompinao saka?
Mety ho toa tsotra be izany, fa raha tsy manana traikefa firy ianao dia mety hieritreritra ilay biby fa somary borosy ianao na mihetsika haingana be. Ho an'ny saka dia lehibe dia lehibe ny zanak'olombelona, ​​ka raha tiantsika hanatona antsika izy, Manoro hevitra anao aho hanaraka an'ity dingana ity:
Mijoroa eo alohan'ny saka anao, ary mipetraha amin'ny tany.
Asao izy hanatona amin'ny fanomezana saka-saka. Raha hitanao fa tsy miraharaha anao izy, apetraho ny iray amin'izy ireo mba hanakaiky ny toerana misy azy, ary avy eo ny iray hafa fa amin'ity indray mitoraka ity dia akaiky anao kokoa izy io.
Azo inoana fa tsy hisalasala hanantona anao ny saka, ka rehefa akaiky azy io dia avelao izy hanitra, ary raha tianao dia omeo fitsaboana.
Avelao izy hanimbolo ny tananao ary hampandeha moramora ny lohany amin'ny rantsan-tànany.
Raha tiany izy dia azonao atao mikapoka ny lamosiny mandra-pahatonganao any amin'ny rambony; Raha tsy izany dia tsy maintsy milamina ianao amin'ny fikapohana ny lohany anio.
Avereno imbetsaka isan'andro ireo dingana ireo isan'andro, dia ho hitanao fa tsikelikely no hanaovanao ny saka anao.
Misy saka ve adin-tsaina raha voakitika?
Ny saka, toy ny olona, ​​dia samy manana ny mampiavaka azy. Tahaka ny fisian'ny olona ratsy fanahy izay maniry bebe kokoa ny hikasihana, hikolokoloana na hifandraisana ara-batana amin'ny ankapobeny… Toy izany koa ny saka. Misy saka izay aleony mihazona fifandraisana bebe kokoa amin'ny saka na olombelona hafa, ary ny hafa izay tsotra fotsiny, mandeha tsara araka izay tiany izy ireo.
Angamba ianao efa nanontany tena raha afaka miompy saka nefa tsy mila manantitrantitra izany, fa izao tokoa ve ny zava-misy? Ilaina ve ny tsy hamelomanao ny saka mba ho tsara eo akaikinao izany na azonao omena azy ny fitiavanao te-hanao izany ianao? Raha ny marina dia ny saka ihany no mamaritra ny fetranao. Raha te-hanafosafo azy ireo ianao dia hasehony anao amin'ny fitenin-dry zareo, ary raha tsy tian'izy ireo ... dia mitovy ihany. Na dia manome hevitra bebe kokoa momba an'io aza izahay mba hahalalana bebe kokoa azy.
Azonao atao ny manohy manafosafo ny saka tsy mila miahiahy, raha mbola "mamela" anao hisompoka azy ny saka anao. Rehefa hitanao fa tsy dia maniry mafy ny hifandray ara-batana izy dia aza misalasala manome azy ny toerany mba tsy hasiaka izy na hiala eo anilanao.
Ilaina ny mahafantatra fa misy saka izay miady saina kokoa noho ny hafa, fa manana kortisol betsaka kokoa ao anaty rany izy ireo ary izany dia mety hampatahotra azy ireo bebe kokoa rehefa mampinono azy ireo ianao. Tsy midika izany hoe ketraka izy ireo satria manafosafo azy ireo ianao ... Izay vao miady saina satria misy zavatra eo amin'ny fiainany izay mahatonga azy ireo hatahotra sy ho mora tohina amin'ny zavatra. Raha heverinao fa izao no mahazo ny saka anao, dia tsara raha mitady an'io antony io izay mahatonga azy adin-tsaina hahafahany mifehy azy haingana araka izay tratra.
Inona no tokony hotadidinao raha tsy mamela ny tenany hikasika ny saka ny adin-tsaina
El stress amin'ny biby dia miseho amin'ny tsy fahasalamana izy. Misy zavatra roa izay miseho manokana. Ny iray dia olan'ny hoditra, ka ny saka dia very volo kely na manadio tena loatra amin'ny toerana iray manokana ka misy tampoka mivalana amin'ny hoditra na fery mihitsy. Ny faharoa dia ny cystitis (areti-mifindra urinary), izay tena fahita amin'ny saka.
Ny mariky ny fihenjanana amin'ny saka dia tsy mora fantarina satria biby tsy dia be fihetsiketsehana fotsiny. Mirona hanafina ny fihetseham-pony izy ireo rehefa tsy faly. Izany dia nilaza fa ny saka izay mandany fotoana be dia be hiafenana, ao ambanin'ny fanaka na avo ao an-trano, eo ambonin'ireo arimoara sy ireo zavatra ireo, dia matetika izany no famantarana ny adin-tsaina. Ny saka dia tokony hidina amin'ny toerana tsara fiarovan-tena hatrany alohan'ny hahatsapany ho mahazo aina.
Afaka miaina am-pifaliana ao anaty trano miaraka amina saka hafa ve ny saka na dia tsy petted aza izy ireo?
Eny, azon'izy ireo izany, saingy tsy mora ny mahita fiaraha-miaina sambatra miaraka amin'ny saka toa ny alika. Ny ankamaroan'ny alika dia maniry ny hihaona amin'ny alika hafa, ary hanorina fifandraisana haingana izy ireo. Manana ny fitenin-tenan'ny vatana izy ireo, ireo famantarana ahafahana manao izany. Ny olana amin'ny saka dia ny tsy fananan'izy ireo rafitra fampitana sonia toy ny alika.
Nefa misy zavatra vitsivitsy azonao atao mba hahazoana antoka fa mifanaraka ny saka roa. Ny zavatra voalohany dia hevitra tsara ny hisafidianana saka efa niara-niaina, ary ny vahaolana tsara indrindra dia ny saka roa avy amin'ny fako iray ihany. Saka izay tsy niara-niaina hatramin'ny fahazazany, mila manao fampidirana am-pitandremana ianao. Ny fomba tsara indrindra anaovana izany dia ny maka tahaka ny fomba mety hahitan'ny saka roa, izay ny fofony. Ary amin'ity vanim-potoana ity tsara kokoa ianao raha tsy manafosafo azy ireo satria ho sorena izy ireo, ny zavatra tsara indrindra dia avelanao izy ireo ho ireo izay manatona anao.
Mety ho faly miaina anaty trano ve ny saka?
Ny saka dia tsy mila toerana ara-batana betsaka hipetrahana. Ny ilain'izy ireo dia toerana azo antoka sy iainana onenana izay mahaliana. Ny olombelona miaina miaraka amina saka anaty dia tokony hifantoka bebe kokoa amin'ny saka, handray fepetra bebe kokoa mba hahaliana ny fiainan'ny saka...
Ary ny saka mipetraka ao an-trano dia azo inoana fa hangataka biby fiompy bebe kokoa noho ny saka mety tonga sy mandeha, izany hoe mahaleo tena kokoa ary afaka mizaha "an'izao tontolo izao." Raha ny tena izy dia ny saka anao no manapa-kevitra hoe iza no hikarakara azy ary iza no tsy afaka manao izany ... Raha "mamela" anao hanome azy fitiavana izy dia tsapanao fa manana tombony ianao satria midika izany fa nifamatotra akaiky taminao izy.
Azon'ny saka saka ve aho?
Mazava ho azy fa ny saka tsy misafosafo toy ny fanaon'ny olombelona, ​​fa raha ny tena izy dia afaka. Hafa hikarakara anao izy, fa ny hafatra dia mitovy: manome ary mahazoa fitiavana. Ny saka mitady ny sakafonao na te haneho ny fitiavanao dia hanao izany amin'ny fomba samihafa:
Eo akaikinao eo foana
Mitady ny torotoranao hatory na hangina
Matory eo akaikinao
Mikosoka ny tavanao amin'ny anao
Atsofohy amin'ny tongotrao ny vatany
Ny saka dia afaka "mamono" anao amin'ny fomba maroNy zava-dehibe dia raha manao izany izy, raha manapa-kevitra ny hanao izany izy na dia efa elaela aza izy tsy namela anao hisolelaka azy ... ilaina ny hamerenanao an'io fikolokoloana io mba hamafisina ny fifamatoranao.
Ny saka tsy mamela ny tenany hikapohana saka ve dia?
Tsy voatery. Ny hevitra hoe efa nokolokoloina nandritra ny fotoana ela izy ireo dia somary somary lava.. Ny saka antononyo, fantatrao hoe iza ilay renim-pianakaviana satria nitady ilay saka avy tany amin'ny toerana hafa ianao. Saingy mety tsy ho fantatrao hoe iza ny raim-pianakaviana satria mivoaka ny saka ary mifidy ny vadiny.
Raha ny tena izy dia izany ny fitondran-tena amin'ny fanambadiana an'ny bibidia fa tsy biby an-trano mihitsy satria mifidy izay vady izy ireo. Ny saka dia tsy tena velomina amin'ny hevitry ny ankamaroan'ny alika. Ny ankamaroan'ny alika dia manana karazan-pirazanana ao ambadika, fa ny ankamaroan'ny saka kosa tsy ... Na bibidia io na an-trano, dia ny saka anao no manapa-kevitra raha aleonao izy na tsia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » curiosities » Tsy ho nokapohina ny saka, fa maninona?
Manana saka izay naka azy tamina protectoa aho, efa 4 volana izy, tena nahafinaritra ahy ary lasa tsara fanahy be izy niaraka tamin'ny zanako lahy izay nilalao taminy foana, tratrako izy satria noteneniny foana aho hividy iray, amin'ny fohy, inona no mitranga fa 6 taona eo ho eo izy izao no mipetraka miaraka amiko satria tsy tia saka ny vadin'ny zanako lahy (fa rehefa tonga tany an-tranoko izy raha nilalao taminy).
Hatramin'ny nilalaovako taminy dia toa mpilalao baolina kitra mahay izy ary ambonin'izay rehetra mpiandry tsatokazo tsara satria naka ny zava-drehetra tahaka ny natsipinao taminy izy fa tsy namela ny tenany ho nofaizina ary ambonin'izay rehetra mitazona azy, tsy miala izy mihitsy, misy fotoana tiako itazonana azy, hamihina azy ary hahatsapa azy eo anelanelan'ny sandriko fa tsy azo atao izany. Inona no azoko atao?
Faly be aho miaraka aminy ary tsara tarehy amiko izy.
Andramo indraindray manome boaty na zava-mahadomelina saka. Tian'izy ireo izany ary azonao atao ny mampiasa an'io sakafo io mba hahatonga azy ireo hatoky tena bebe kokoa. Eo am-pisakafoanana dia sondroy ny lamosiny toy ny olona tsy maniry izany zavatra izany: fikolokoloana roa na telo dia esorinao ny tananao. Ka mandritra ny andro maromaro.
Ho hitanao tsikelikely ny fomba hanatonana anao kokoa, hikosehana amin'ny tongotrao.
Etsy an-danin'izany, rehefa mijery anao aho, tery kely ny masonao. Ity dia hanome hafatra tsara dia tsara ho azy: tianao izy ary afaka matoky anao izy. Raha manao toy izany koa izy, dia satria ny fankasitrahana no iraisana.
Alejandra Chavez dia hoy izy:
Salama, salama, alatsaho andro vitsivitsy, naka zanak'omby kely 2 volana aho, nanatona ahy izy hangataka sakafo, fa rehefa te hitondra azy aho dia mihetsika ny zava-drehetra mandra-panondrako azy, tsy tiany ny mitondra azy ary amin'ny fotoana anaovany fikolokoloana azy, dia nisintaka izy, ary tiako ilay izy, hany ka hitondrako azy sy hanorohany azy an-keriny, diso ve aho raha nanao an'io? Moa ve rehefa nandray ilay sakaizako voalohany aho dia tonga irery ho any ento izy ary haharitra ela eo am-pelatanako izy natory ary tiako ny hanao toy izany amin'ny saka ihany fa tsy avelany ny tenany, Inona no azoko atao?
Valiny tamin'i Alejandra Chávez
Mila mahazo ny fahatokisany tsikelikely ianao, miaraka amin'ny lalao, kalon'ny saka saka mando, ary hikapoka azy ohatra rehefa misakafo izy, na rehefa matory. Ireo caresses ireo dia tsy maintsy maharitra fotoana fohy; Rehefa hitanao fa manakaiky anao izy io, dia azonao atao ny manafosafo azy matetika kokoa.
Gaby dia hoy izy:
Salama, manana kittens tsara tarehy 4 aho, fa ny iray amin'izy ireo, ilay saka faha-2 nananako, dia tsy azo saro-kenatra na nalaina taloha intsony, raha navela nilalao be ilay izy, fa nitondrako saka iray hafa aho ary tsy nilaozana intsony ary zara aza hita, tsy fantatro izay hatao fiovana tampoka
Mamaly an'i gaby
Neutered ve izy ireo? Raha tsy izany dia inoana fa niditra tao anaty hafanana ianao ary ny hafa tsy te-hanakaiky loatra.
Raha izany ny torohevitro dia ny hitondra azy ireo hanipy azy ireo hialana amin'ny olana.
Luisa Betancourth dia hoy izy:
Salama, manana saka nalaiko aho tamin'ny Oktobra 2016 ary bevohoka izy. Izy dia be fitiavana, entina ary tsy mahery setra. Avy eo teraka ireo kittens, nokaonin'izy ireo mandra-pahatongan'ny 2 volana ary notazoniko roa izy ireo.
4 volana ny saka ary 10 volana ny saka ko, fa tsy mamela ny hikapoka azy na hitondra azy izy, lasa mahery setra na dia miaraka amin'ireo zanany vavy aza. Inona no azoko atao ???
Valiny tamin'i Luisa Betancourth
Angamba ianao efa nafana indray ary tsy tianao ny manodidina ny sakaakanao.
Ny torohevitro dia ny hitondra azy any amin'ny neutering mba hisorohana ny fako ary hampitony azy.
Salama! Volana vitsivitsy lasa izay dia navelan'izy ireo tamina vavahady zazakely natahotra izahay ary nanapa-kevitra ny handray azy izahay, rehefa nandeha ny fotoana dia natoky tena izy, saingy hatramin'ny niaraka taminay dia tsy nifandray tamin'ny saka hafa izy. Roa andro lasa izay dia nahita zanak'akanjo iray izahay ary nentinay nody, tsy dia lehibe ny saka zanakay, eo amin'ny 4 volana eo ho eo izy, saingy tokony ho roa volana ilay saka. Ary rehefa tonga izy dia tena ratsy ny fihetsiny, mbola tsy nahita azy niaro tena izahay, fa manana azy ireo amin'ny efitrano misaraka izahay ary mitondra ny saka 15 minitra ho hitan'ny saka. Saingy mbola betsaka ny fandavana azy ary ankehitriny manandrana manaikitra ny rambony izy ary manamboatra izany, inona no hataoko? Misaotra
Ny teratany dia tena faritany hatramin'ny mbola kely. Ny torohevitro dia ny hitazomana ny saka ao anaty efitrano mandritra ny telo andro. Apetraho ny sakafonao, ny rano, ny fitoeram-pako ary ny farafara izay norakofanao lamba firakotra na lamba. Sarony lamba firakotra na lamba koa ny farafaran'ny saka, ary amin'ny andro faharoa sy fahatelo dia atakalo ny lamba firakotra na lamba.
Amin'ny andro fahefatra, avelao izy ireo hihaona, fa araho maso izy ireo sao sanatria. Omeo boatin-tsakafo mando izy ireo - samy amin'ny fotoana iray ihany - mba ho hitan'izy ireo fa tsy misy zavatra mitranga. Raha mimenomenona na mimofona izy ireo dia ara-dalàna izany. Ny tsy tokony hitranga dia ny volon'ny volony ary miady izy ireo. Raha hitanao fa efa hanao izany izy ireo dia ampisaraha ary andramo indray ny ampitso.
Salama, manana mpanafika aho nanomboka ny volana oktobra 2016, noraisinay nandritra ny roa volana mahery izy io ary rehefa tonga ilay izy dia mamy avokoa. Handry eo akaikinay izy, hanafosafo azy isika ary hikororoka mandra-patorian'ny torimaso ... Saingy rehefa nandeha ny fotoana dia tsy nanao an'izany intsony izy ary nanomboka nanao fitondran-tena lavitra. Nanomboka nilalao tamin'ny tanany izy, natory irery ... Hatramin'ny fotoana tsy ahafantarana azy ankehitriny, dia nisintona ny tanany izy ary nanomboka nilelaka anao mandra-pahatonga anao mavesatra dia manaikitra izy. Tsy manana olana amin'ny maha-toetrany azy aho, fa tiako kosa ny hiverenany amin'ilay saka be fitiavana taloha.
Nisy zavatra nitranga ve mety nahatonga anao hanova ny toetranao ankehitriny na taloha? Ohatra, famindran-toerana, famoizana olon-tiana, fotoana fihenjanana, ...
Na izany na tsy izany, tokony ho fito volana eo ny saka anao, sa tsy izany? Amin'ity taona ity dia rehefa mahatratra ny fahamatorana ara-nofo izy ireo (indraindray aza aloha kokoa). Raha tsy neuter izy, dia mety ho sosotra kely. Mazava ho azy fa ny saka ao anaty hafanana dia lasa be fitiavana, nefa indraindray sendra lasa kely izy, ndao lazaina hoe mora sosotra.
Ny toro-hevitra omeko anao dia ny hitondranao azy hanadino raha tsy izany. Tsy ny hampiverina azy amin'ny toetrany ihany fa koa mba hisorohana ny fako tsy ilaina.
Safidy iray hafa ny fanomezana sakafo am-bifotsy am-bifotsy azy indraindray ary araraoty ny fotoana laniny mihinana azy. Ilaina ihany koa ny milalao miaraka aminy, ohatra amin'ny tady, satria ny lalao dia fomba iray tena mandaitra hahazoana ny fahatokisana sy ny fisakaizan'ny saka. Tsikelikely dia tokony ho tsara fanahy sy ho tia anao kokoa izy.
Yanet dia hoy izy:
Salama! Roa andro lasa izay dia naka zazakely aho, niditra tao amin'ny garazin'ny mpifanila trano taminy izy ary nasiany sakafo izy fa tsy afaka nitazona azy intsony intsony noho ny fitarainan'ny mpiara-monina. Tokony ho herintaona teo ilay zaza ary somary malina izy ary tia olona, ​​namela ny tenany halaina ary nanome oroka ahy teny an-tanako fotsiny nefa tsy nahalala ny tenako, nanapa-kevitra ny hitondra azy mody aho ary hametraka azy amin'ny efitrano misaraka, izaho manana saka roa hafa ao an-trano (vavy sy lahy, samy voadoka) ary satria namofona azy ilay vaovao, dia tsy tiany ho safosafisiko izy, dia misakafo tsara izy, nefa mandany matetika amin'ny mpitatitra izy, ary rehefa ataovy mody manohina azy izy dia mitroka. Inona no azoko atao mba hahatonga azy hatoky azy indray? Rahoviana no fotoana mety indrindra ary ahoana ny fomba hampahafantarana azy amin'ireo saka hafa? Misaotra mialoha!!
Mamaly an'i Yanet
Ara-dalàna amin'ny saka ny mahatsapa ho "tototry" kely amin'ilay fanovana. Mety handany andro maromaro ianao vao zatra ny tranonao vaovao.
Mba hifaneraserana amin'ny saka dia manoro hevitra anao aho mba hamerenanao ny fahatokisany voalohany, ary noho izany dia tsy misy tsara kokoa noho ny manome azy ireo saka saka indraindray (raha azonao atao, iray isan'andro). Mandritra ny andro voalohany dia aza manao na inona na inona, mankanesa eo akaikiny fotsiny. Fa ny faharoa dia azonao atao ny manandrana misarika azy "tsy misy mahatsikaritra"; Raha hitanao fa mitebiteby sy / na misento aminao izy dia aza atao izany ary andramo ny ampitso, fa raha manohy mihinana milamina izy dia manafosafo kely azy.
Ampitomboy tsikelikely ny fotoana ampiasainao hikolokoloana azy. Aorian'ny fisakafoanana dia tena ampirisihina mafy ianao hilalao miaraka aminy, amin'ny tady ohatra. Tsy ho ela dia hatoky anao indray izy.
Rehefa milamina aminao izy dia afaka manomboka mifanerasera aminy amin'ny saka hafa ianao. Sarony lamba firakotra na lamba ny farafaran'izy ireo sy ireo volom-borona hafa (miankina amin'ny fararano na fahavaratra), ary atakalo hatramin'ny ampitso.
Amin'ny andro fahefatra / fahadimy dia azonao atao ny manolotra azy ireo, fa manatrika amin'ny fotoana rehetra. Raha mitroka na mimenomenona izy ireo dia ara-dalàna, ny tsy tokony hataon'izy ireo dia ny mifampijerijery mampiseho ny nifiny. Raha manao izany izy ireo dia avelao hisaraka mandritra ny iray andro izy ireo ary manandrama indray.
Salama! Manana saka izay nomen-dry zareo aho omaly, tsy fantatro hoe firy volana izany fa toa 4 na 3 volana eo ho eo, ny tiana holazaina dia hoe matahotra be izy, tsy mamela ny ho voakolokolo ary miafina aiza Tsy hita izany, hany ka sarotra amintsika ny manala azy, satria tianay tsy hatahotra ianareo manandrana manala azy amin'ny hery, ary tsy haiko koa ny mametraka fifandraisana misy eo amin'ny samy mpinamana, mifankatia sy mifankatia. roa, inona no atolotrao? ...
Tsy maintsy manam-paharetana ianao. Ny saka dia afaka maka fotoana be dia be.
Atolory indraindray ny kaliny na ny saka saka azy, manasa azy hiara-milalao aminao, ary avelao izy hizaha ny tranony vaovao.
Rehefa manatona anao tsy amin-tahotra izy dia alao izy indraindray, toy ny hoe tena tsy tiany. Amin'ny voalohany dia hahatsapa ho tsy mahazo aina ianao, ary mety hatahotra mihitsy aza ianao manontany tena hoe inona no nitranga, nefa tohizo izany mandritra ny andro / herinandro vitsivitsy.
Aza terena hanao zavatra izy. Diniho ny fihetsik'izy ireo. Topazo maso izy ary sory ny masonao; amin'izay dia ho fantany fa tianao izy, ary afaka matoky anao izy. Raha manao toy izany izy dia efa nahavita nitoky taminy ianao.
Saingy mila fotoana, fotoana. Mandehana amin'ny hafainganam-pandehanao ary ho hitanao ny fandehan'ny zavatra rehetra.
Manana saka efa olon-dehibe aho, naka azy teny an-dalana tokony ho roa volana lasa izay, tsy namela ny tenany ho totohondry mihitsy, efa manakaiky ahy kokoa, rehefa miresaka aminy aho dia tonga, efa voadio . Androany aho nitondra takelaka taratasy teny an-tanako ary nanandrana nikolokolo azy tamin'ny lambam-pandriana aho dia lasa izy, nefa avy eo nanantona ahy izy ary nokororohany ny tongotro, tezitra izy satria nanandrana nisambotra azy aho dia nahavaly. Ahoana no fomba hahamety kokoa azy io?
Ny saka rehefa alaina eny an-dalambe izy ireo satria ny olon-dehibe dia manana olana bebe kokoa amin'ny fampifanarahana, indrindra raha mbola tsy nifandray tamin'ny olombelona mihitsy izy ireo.
Tokony hanana faharetana isika. Aza manandrana mikasoka azy, mainka fa raiso raha tsy tiany izany. Aleo mandeha tsikelikely.
Manolora saka, na sakafo lena (kapoaka) aza. Asao izy hilalao, ohatra, amin'ny tady.
Rehefa mandeha ny fotoana dia hatoky tena bebe kokoa ianao.
Manana toro-hevitra bebe kokoa ianao ao Ity lahatsoratra ity.
Salama, naka saka olon-dehibe (tsy neutered) izahay satria tsy afaka nikarakara azy ny tompony taloha. Ny olana dia avy amin'ny tsy famelany hikopaka, hikosoka na hanapaka ny hoho ... Ary rehefa akaiky azy isika dia mitroka, mimenomenona, mamoaka claw sy hiakiaka ... tsy maninona ny saka manodidina ny trano, mihazakazaka erany izy fa miaraka aminay tsy misy lalana. Tao an-trano nandritra ny andro vitsivitsy izy ... Angamba mila omena fotoana bebe kokoa izy? Manome loka azy izahay fa tsy tiany izy… Tsy fantatro izay azoko atao.
Eny, mila fotoana 🙂
Omeo kapoaka (sakafo lena) saka saka indraindray, ary asao izy hilalao tady na baolina. Ka hatoky tsikelikely anao izy.
Dunia Fuentes dia hoy izy:
Nomena zanak'omby kely 2 volana sy tapany aho ary tsy te hivoaka avy eo ambanin'ny fandriana ary tsy mamela ny ho voakitika, masiaka be, inona no azoko atao?
Mamaly an'i Dunia Fuentes
Zava-dehibe ny faharetana be. Omeo sakafo mando ho an'ny zanany izy (satria misy fofona matanjaka kokoa, ho tiany izy), asao izy hilalao isan'andro amin'ny tadiny na baolina, ary ho hitanao fa hatoky anao izy amin'ny farany.
Mampiasà zanak'ondry iray tamin'izy roa volana. 4 volana izy izao, ary ny saka rehetra ato an-tranoko dia mafana, ny tena marina dia tsy fantatro raha nafana ihany koa izy satria nahatonga ahy ho tanora tokoa. Saingy tato ho ato dia navelany hikolokolo kely izy, ory izaitsizy izy,
(Manodidina ny 1 herinandro eo ho eo.) Aza avela haka azy io izy ireo, satria manomboka manaikitra ary mihetsika ka navoakany. Inona no mety hitranga aminy? Misy zavatra maharary ve? Bevohoka ve ianao? Ary maninona no avela ho voakitika?
Bevohoka angamba izy, eny. Manoro hevitra anao aho mba handray ny saka mba hatsipy, mba ho azo antoka fa hiverina toy ny taloha ihany ilay saka.
Valeria Martinez dia hoy izy:
Salama, ny zava-mitranga dia manana saka roa (reny sy zanaka vavy) aho fa ny reniny (keilly) dia mamela ny zanany hiaina fotsiny ary mamono ny lahy; Etsy ankilany, ny zanany vavy (Mía) dia nanana zanak'ondry (Felicia) fa avelako "eo ambany fiandraiketan'i" Keilly izy, tokony ho roa volana ilay saka, nefa tsy navelany ho voakasik'izany izy ka hanaikitra na hanaikitra. , Keilly dia vao avy niteraka zanak'ondry iray hafa (Ambar) tao anatin'ny 3 herinandro ary niara-nipetraka ny zanak'ondry roa vavy fa manahy aho fa tsy misakafo ampy i Felicia ka tiako ho fantatra ny fomba hanatonana hikasika an'i Felicia sy hahafahana mamahana azy, manafina foana izy ary manomboka te-hanafika toy ny azoko atao mba handray azy io sy hanome sakafo azy
Valiny ho an'i Valeria Martínez
Raha zakanao izany dia tsara kokoa ny mitondra azy ireo ho entina any an-tsambo, izy rehetra, na ny tanora aza rehefa feno taona (enim-bolana).
Ny tsy fakan'izy ireo neuter dia mety hampatahotra azy ireo satria manana zanak'ondry hiarovana sy hikarakarana azy ireo koa izy ireo.
Mba hanatsarana ny fiaraha-miaina dia azonao atao ny manome sakafo saka mando azy rehetra amin'ny fotoana iray. Araraoty io fotoana io mba manafosafo azy ireo (nefa tsy resaho izy ireo). Mandania fotoana amin'izy ireo, ary asao i Felicia hilalao amin'ny tady na kilalao hafa. Nisisika isan'andro izy, ary azo antoka fa milamina miaraka aminao izy.
Lidiana dia hoy izy:
Salama! Naka saka iray teny an-dalana nandritra ny 3-4 volana teo izahay. Natahotra be ilay saka ary afaka herinandro dia tsy nahatsikaritra fandrosoana izahay. Afenina foana, manana endrika malahelo izy, mando be dia be indrindra izy rehefa irery ary tsy azo atao ny manatona azy satria mikoropaka noho ny tahotra ary raha heveriny fa nanakaiky loatra ianao dia mievoka.
Rehefa ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny isika dia tsy manaisotra ny masony amintsika. Niezaka nampianatra azy sakafo izahay, mody tsy eo izy, mampianatra kilalao ary tsy misy ...
Tsy fantatsika raha nanao soa taminy isika tamin'ny fitondrana azy niaraka tamintsika na nanorisory azy isika satria tsy te ho ao an-trano ...
Mahatalanjona ... Inona no azontsika atao?
Valio i Lidiana
Amin'io taona io dia efa tsikaritry ny saka mania izay misy azy ary, mazava ho azy, fa tsy niara-niaina tamin'ny olombelona taloha, dia tsy fantany hoe inona izany.
Na izany aza, tsy mbola tara ny fahazarany aminao, satria mbola zazakely izy. Saingy mila manam-paharetana be ianao ary manizingizina betsaka, amin'ny lalao, amin'ny sakafo.
Mila milamina ny tontolo iainana, tsy misy tabataba mafy na fihetsehana tampoka.
Raha azonao atao tsara i Feliway amin'ny diffuser (any amin'ny fivarotana biby) dia hanampy anao ho tony izany.
Ny zanak'anabaviko dia naka saka 2 taona, tao amin'ny toeram-pialofana nanatona azy izy ary nihevitra fa hitovy izany ao an-trano. Efa ho 6 volana no nananany an'io ary tsy afaka nanakaiky azy. Mino izy fa niharan'ny herisetra ary tsy niara-niaina tamina fianakaviana mihitsy. Tsy te hanery azy izy ary manantena fa ho zatra tsikelikely izy. Afaka manao zavatra hafainganina ve ianao?
Wow, zavatra mahantra 🙁
Amin'ireo tranga ireo dia mila manam-paharetana be ianao. Ary, ambonin'izany rehetra izany, miezaha tsy mitabataba.
Ny fampiasana feliway sy ny fitendrena mozika milamina (toa ny tera-tany amerikanina, ohatra, na japoney nentin-drazana) dia zavatra kely afaka manampy.
Manoro hevitra anao ihany koa aho ny hanome azy saka-tsaka sy kalon'ny sakafo mando indraindray (ity indraindray indraindray, satria raha tsy izany dia mety ho zatra azy izy ary tsy te hihinana ny sakafony mahazatra).
Ary raha mbola tsy mihatsara io dia misy ny safidy amin'ny fakana hevitra amin'ny manam-pahaizana momba ny fitondran-tena. Raha avy any Espana ianao dia manana roa tena tsara izahay: ny iray dia Laura Trillo Carmona (avy amin'ny therapfelina.com) ary ny iray dia i Jordi Ferrés (avy amin'ny educadordegats.cat/es/index.html).
Isaac ramirez dia hoy izy:
Manana saka 2 izay rahavavy aho, nomeny ahy izy ireo hatramin'ny mbola kely vantany vao nahaleo tena tamin'ny saka reniny ... rehefa nampidirina izy ireo satria mazava ho azy fa sosotra izy ireo ary nitsoaka nanafina taorian'ny 1 izy ireo nanomboka nanantona ahy ary avy eo nanomboka nandao azy aho avy eo manosika ny iray hafa nanaraka azy fa matoa izy ireo nitombo (4 - 5 volana) ilay iray izay nanatona ahy izao dia tsy tia olona hikasika azy ary mitaraina ho an'ny fahasalamana aza izy dia tonga lafatra, entinay matetika any amin'ny dokotera izy ary manana ny fanaovam-baksiny izy roa izay efa nodidiana hatramin'ny 2 volana teo ho eo, rehefa natory ny saka dia tsy manahy ny ho voadinika izy mandra-panamboarany ka ny pansita sy ny volombavany no voadidy nefa izy mifoha dia veryyyyy tsy fahita firy izy matetika mihazakazaka na mitomany (fa raha miresaka aminy aho dia tonga amin'ilay voalohany izy, azony tsara nefa toa hafahafa amiko ny tsy avelany hikofokofy na zavatra hafa) ny rahavaviny niova ho manaikitra anao akory aza, ka safosafoinao izy, tiany io fony izy ilay izy izay vao tonga aho dia ela kokoa vao nanatona ary mandra-pahatongan'ny Nimenomenona tamiko izy.
Valio Isaka ramirez
Misy saka ... sy saka. Mitranga amiko ihany koa izany, fa manana saka miempo amin'ny safosafo aho, fa misy kosa saka tsy tiako loatra. Ara-dalàna izany. 🙂
Azonao atao ny manandrana mikapoka azy rehefa be atao izy, ohatra, rehefa misakafo, fa raha tsy tiany… dia tsy misy.
Salama. Manana fitoerana masina saka aho. 21 amin'ny fitambarany. Misy saka (avy amin'ny saka voavonjy izay bevohoka) izay natahotra be foana. Avelany hikofoka fotsiny izy rehefa omeko sakafo izy, fa ny andro sisa dia mandositra izy ary tsy avelany hanakaiky azy aho (afa-tsy raiso aho). Efa ho 2 taona izy izao, fa ny fihetsiny foana no tsy miova. Miaraka amin'ireo rahavaviny roa sy ireo ambin'ny saka rehetra aho dia tsy manana olana, fa ity iray manokana manome olana ahy satria tsy afaka manakaiky aho afa-tsy rehefa manome sakafo azy aho. Misy azoko atao ve? Nanandrana ilay sakafo aho, fa raha vao tsy misakafo aho dia miala. Tsy tsikaritro fa tahotra izany (raha misy olona hafa miditra amin'ny fitoerana masina dia hafa izy io, mangovitra). Rehefa nitaiza azy ireo niaraka tamin'ny reniko sy ireo rahavavy aho, dia navelany ho tratra, na dia izy aza no mora zahana indrindra.
Raha ny filazanao azy dia tsy te ho saro-kenatra na maneho fitiavana izay misy fifandraisana ara-batana fotsiny ilay saka. Tsy misy zavatra mitranga. Mila manaja azy fotsiny ianao 🙂
Mba hampisehoana aminy fa tianao izy dia tsy ilaina ny manana azy eo aminao. Raha mijery azy ianao ary miposaka miadana dia efa milaza aminy ianao fa mahatsapa fankasitrahana azy ianao.
Romina dia hoy izy:
Salama, manana saka sahabo ho 6 na 7 volana aho, hitako teny an-dalana izy tamin'izy teo anelanelan'ny 2 sy 3 volana, ny zava-nitranga dia lasa mahery setra be izy, tsy navelany hitondrako azy iray segondra, ary talohan'izay dia natory teny ambonin'ny ahy tampoka izy tamin'ny voalohany nefa tsy natory na taiza na taiza izy, be ratra, ary manana kilalao be dia be ary milalao miaraka aminy aho fa miakatra hatraiza hatraiza foana, manaikitra tariby sy ny zavatra rehetra, mikorisa ahy sy ny reniko, ny fanontaniana dia hoe matory fotsiny izy rehefa avelantsika any amin'ny transporter na amin'ny alina dia avelantsika any an-dakozia miaraka amin'ny sakafony, rano, fandroana ary ny fandriany ary koa kilalao. Saingy tsy hitantsika intsony izay hatao, saika isan'andro dia manaisotra anay izy, fantatro fa manao izany izy nefa mampijaly anay ary tsy azony ny fetrany. Tsy haiko raha hanatsara ny toetrany ny fitondrana azy any amin'ny castrate, fa manantena aho fa. Satria lasa sarotra be ny fiaraha-miaina toy izao.
Valiny tamin'i Romina
Ny fanolorana azy dia zavatra anolorako azy, satria hampitony azy io. Saingy tokony ho fantatrao fa tsy hamaha ny olana izany. Mba hitrangan'izany dia tsy maintsy manam-paharetana ianao, milalao zavatra betsaka aminy ary ampianaro aza mikorapaka efa tsy manaikitra.
Francisco Rueda dia hoy izy:
Nandray zanak'akanjo nigadra izahay, antenaina fa hanana iray volana hitondra azy mody izy, karakarainay am-pitiavana sy am-pitiavana be, mividy kilalao, farafara vatomamy izahay, fa etsy ankilany, tsy dia be fitiavana izy avelany hikofokofoka fotsiny ny lohany, raha mikasoka ny vatana aho dia manome anao nibble (malalaka) tsy hianika amin'ny tongotray mihitsy, raha misy olona mody dia mametafeta azy izy, matory fotsiny dia tonga eo amin'ny iray amin'ireo fandriana miaraka aminay izy ary matory eo aminy. tongotra, ny zanako vavy mankafy azy fa tsy mampiseho fitiavana ny iray amin'ireo fianakaviana izy, mandeha amin'ny làlan-kalehany foana izy, mankatoa fotsiny izy raha miantso azy hisakafo ianao, amin'ny tranga hafa tsy. Inona no azontsika atao?
Valiny tamin'i Francisco Rueda
Ny saka tsirairay dia samy manana ny toetrany ary tsy azo ovaina izany.
Ny azonao atao dia ny manolotra tsaboiny tsindraindray, ary indraindray - tsy manototra azy - hikopohy ny lohany kely rehefa misakafo izy. Tsikelikely dia hanaiky bebe kokoa anao izy.
Fa manizingizina aho, raha tsy be fitiavana izy, dia tsy misy zavatra mitranga. Ny iray amin'ireo saka ataoko dia tsy mamela ny hisamborana azy ihany koa, fa mampiseho ny fitiavany amin'ny fomba hafa (mikisaka kely, mikosoka ny tongony, avelao hikopaka ny lohany).
4 volana lasa izay dia nanangana zanak'omby mirenireny 6 volana teo ho eo aho. Neterinay avy hatrany izy satria efa manana saka hafa mitovy taona aho.
Ny olana dia saka tena mampatahotra sy tsy mahatoky ary azo atao ny manafosafo azy rehefa eo amin'ny lampihazo fa tsy azonao. Amin'ny toe-javatra hafa rehetra dia mandositra amin'ny horohoro izy ary miery. Takatro fa tsy mitovy ny saka rehetra ary tsy manana olana amin'izany aho raha tsy hoe tsy afaka mitondra azy hitondra azy any amin'ny vet. Mandeha amin'ny fomba tahotra izy, hyperventilate ary mipi-maso mihitsy aza ary mazava ho azy fa mikaroka anao ary mandositra amin'ny fomba tsy azo atao ny mametraka azy ao anaty fiara. Rehefa nanangana azy aho dia efa sarotra ny nisambotra azy, saingy tonga tsy ampy sakafo izy ary tsy nanana hery firy. Ankehitriny dia tsy azo atao izany. Tsy hitako izay hatao.
Ankasitrahako izay soso-kevitra. Misaotra anao.
Enim-bolana izy dia alika kely, saingy tamin'ny fahatongavany teny an-dalana dia saika niomana ho olon-dehibe izy. Ny fe-potoana sosialin'ny saka dia manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 volana (herinandro miakatra / midina), ka rehefa enim-bolana dia lafo kokoa ny fampifanarahana amin'ny fiainana an-trano.
Tsy midika akory izany hoe tsy azo atao izany, fa sarotra kokoa.
Ny torohevitro dia ny maka kapoaka vitsivitsy amin'ny sakafo saka, ary avelao hisokatra eo an-jorony foana ny mpitatitra. Isan'andro, na isaky ny mandinika izany ianao, omeo sakafo am-bifotsy izy amin'ny fametrahana ny takelaka roa metatra miala amin'ny mpitatitra; raha tsy mihinana azy izy dia apetraho lavitra. Amin'ny andro manaraka, apetraho akaiky kokoa izany isaky ny mandeha (miresaka momba ny santimetatra isika).
Ny hevitra miaraka amin'ity dia ny hoe mahazo aina amin'ny mpitatitra eo akaikinao ianao.
Rehefa vitanao izany, dia apetraho ao anatin'io entana io ny lovia misy sakafo, ary avelao hivoha ny varavarana. Ataovy izany mandritra ny andro maromaro, satria tsy maintsy hitanao fa azonao ampiasaina toy ny fialofana hafa.
Rehefa tonga ny fotoana handehanana any amin'ny veterinera dia tsy maintsy mametraka sakafo ao amin'ny mpitatitra ianao na misarika azy amin'ny fitsaboana.
Mazava ho azy fa tsy maintsy manana faharetana be ianao. Saingy ho hitanao tsikelikely ny vokatra.
Hihaona amin'ny saka be fitiavana Neva Masquerade